Kooxda Arsenal oo laga soo diiday dalab ku kacayay 34 milyan ee gini oo ay ka gudbisay xiddig ka tirsan Real Madrid – Gool FM
(London) 28 Sebt 2021. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa la soo diiday dalab ku kacayay 34 milyan oo gini oo ay ka gudbisay mid ka mid ah xiddigaha Naadiga Real Madrid.
Arsenal ayaa la warinayaa inay dalab ku kacayey 34 milyan oo gini ka gudbisay xiddiga kooxda Real Madrid ee Marco Asensio suuqii xagaaga, laakiin waa laga soo diiday dalabkaas iyadoo loo sheegay in laacibku uu mustaqal ku leeyahay caasimadda Spain.
Asensio ayaa saftay todobo kulan tartammada oo dhan illaa iyo haatan xilli ciyaareedkan kaddib markii Macallinka cusub ee Real Madrid, Carlo Ancelotti ayaa ku adkeystay inuu qeyb ka ahaa qorshihiisa kooxda koowaad.
Gunners oo Martin Odegaard kala wareegtay kooxda ka ciyaarta horyaalka Spain suuqii xagaaga ayaa aad u doonaysay Asensio, waxaana laga soo diiday dalab ay ka gudbisay sida ay sheegtay idaacadda Spain ee Cadena Ser, iyadoo Kooxaha Tottenham iyo AC Milan ay sidoo kale doonayaan saxiixa laacibkan.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Macallinka Kooxda Arsenal ee Mikel Arteta uu weli doonayo saxiixa Asensio, isla markaana uu u dhaqaaqi doono suuqa bisha Janaayo.
Xiddiga reer Spain ayaa arkay horumarkiisa Madrid oo cirka isku shareeray kadddib markii uu ka soo laabtay dhaawac xun oo jilibka ah oo uu la maqnaa 11 bilood bishii July 2019.